Ihe ndepụta ndepụta azụmaahịa azụmaahịa 2014 | Martech Zone
2014 nwere ike ịbụ afọ anyị niile kwụsịrị ịchụ ihe na-egbu maramara ma laghachi na usoro ịzụ ahịa na-agba mbọ na eziokwu? Nnaa, Atụrụm anya na saw anyi huru otutu ulo oru chua ufodu ndi nzuzu na afọ ole na ole gara aga. Site na oge mmefu ego ha kpọnwụrụ na enweghị nsonaazụ, ọ bụ ya mere ha ga-eji kpọọ anyị oku. Enwere ọtụtụ ịgụta ọnụ ma ọ tụgharịrị afọ m na-ele ụfọdụ ụlọ ọrụ teknụzụ na ụlọ ọrụ na-ekpofu ihe nzuzu na ịnata ọtụtụ ego site na ọtụtụ mmefu ego nke obere obere azụmaahịa.
Dị ka j2 Nyocha Amụma Globalwa:
28.16% chọrọ ịbawanye ọnụnọ ha n'ịntanetị, dị ka ịtọlite ​​weebụsaịtị ma ọ bụ ụlọ ahịa dị n'ịntanetị.
23.61% chọrọ iwere akpaaka email na-ere ahịa ka mfe wee rụọ ọrụ nke ọma iru ndị ahịa.
20.52% chọrọ iji email rụọ ọrụ nke ọma na-akpali ndị ntụgharị okwu na ịkekọrịta na netwọkụ mmekọrịta.
13.76% chọrọ iji mejuputa atumatu ahia ahia kacha mma maka email na njikarịcha weebụsaịtị.
11.05% chọrọ iji hụ na mbọ ha na-azụ ahịa email anaghị akwụsị na nzacha spam ma ọ bụ taabụ Gmail.
Achọrọ m ịma ebe video ahịa azum nọ na-amụ ihe. Ọ bụrụ n ’ọdịiche dị n’echiche m, ọ ga - abụ na obere azụmaahịa nwere ike ịdenye aha ọtụtụ ọrụ ịre ahịa vidiyo dị ọnụ ala iji nweta ozi ha. Nke a ga-enyere ha aka ịsọ mpi na mmefu ego nke buru ibu karịa nke ha ma merie.
Tags: 2014 chọrọ ndepụtaemailj2 Ụwaj2 Global Amụmaj2 Nyocha Amụma GlobalwaMobile na Mbadamba ụrọahịa efuobere azụmahịa